Iiraan oo sheegtay shaqaalaha markabka inay badqabaan,waxaana UK uga digtay xiisadda inay sii kordhin – Radio Daljir
Luulyo 22, 2019 6:02 b 0
Iiraan ayaa uga digtay dowladda UK inay sii kordhin xiisadda labada dal, kadib markabka ku gooshayay calanka Britishka ee ay qabteen ciidamada Iiraan, talaabadaasi oo UK ay ku sheegtay mid cadaawad horseedaysa.
Dowladda Britain ayaa diiday sharaxaadda Tehran ee ah in markabka Stena Impero Jimcihii in la qabtay, kadib markii Iiraaniyiinta ay uga digeen inuu adeegsan marinka Hormuz oo ah marinka ugu wayn ee maraakiibta shidaalka ay ka gudbaan.
“UK iyo kuwa kalle ee hurinaya xiisadda siyaasadeed ee Iiraan iyo UK waa kuwa ka baxan arrimaha maraakiibta, waana khatar aan caqli ku salaysnayn oo kusoo kordhay gobolka” ayuu yiri ergayga Iiraan ee Britain Hamid Baeidinejad.
Hadalkiisa ayaa imaanaya maalin kadib xoghayaha arrimaha dibadda ee UK Jeremy Hunt uu sheegay talaabooyinka xukuumadda Tehran ay qaaday ay muujinayso astaamo keeni kara welwel hor leh iyo inay doorato hanaan sharci darro iyo hab dhaqan xasilooni darro abuuri karta.
Gudoonka baarlamaanka ee Iiraan ayaa ka hor horjeediyay baarlamaanka Iiraan inay ciidamada kacaanka ay ka jawaabeen afduubka Britain ee markabka saliidda ee Iiraan.
Dhanka kalle xaaladda shaqaalaha markabka la socda oo dhan 23- qof ayaa wanaagsan, waxaana markabka uu ku suganyahay dekedda Bandar Abbas, kadib markii Jimcihii ciidamada ilaalada kacaanka ee Iiraan ay soo qabteen.